Dhirta Herkimer waa dhoobo qudaar ah oo labajibaaran - Video
Dhirta Herkimer waa kareemo qufac ah oo labanlaabay oo lagu ogaaday in bakhaarro lagu soo bandhigay gudaha degrooyinka degmada Herkimer, New York iyo Wabiga River Mohawk. "Dheeman" magacoodu waxay u egtahay labadaba ciriiri iyo dabeecada dabiiciga ah - karkhuuriyadu waxay leeyihiin dhibco labalaab ah iyo waji buuxa oo 18 ah, lix dhibic kasta, lix xarumood. Sababtoo ah goobaha ugu horreeya ee helitaanku waxay ahaayeen tuulada Middleville iyo magaalada Little Falls, siday u kala horreeyaan, macdanta ayaa sidoo kale loo yaqaan diamond lumber ama diamond Diamond dheeman.
Dhirta Herkimer waxay noqotay mid si weyn loo aqoonsaday kadib markii shaqaaleeyayaashu ay ku soo arkeen tiro balaaran intii ay jarayeen mareegta Mohawk River Valley ee qarnigii 18. Geologistu waxay soo bandhigtay muraayad faafin ah oo lagu soo bandhigay degaanka Herkimer County waxayna bilaabeen in la qodo halkaa, taasoo keentay in la yiraahdo Alkimer diamond diamond. Calaamado laba geesood ah ayaa laga heli karaa goobaha adduunka oo dhan, laakiin kaliya kuwa laga gooyey Degmada Herkimer waxaa la siin karaa magacan.
Taariikhda yurubiyadeed ee kumbuyuutarradani waxay bilaabeen ilaa 500 oo sanado ka hor ah oo ku yaalla badda badda ah taas oo ka soo degtay buuraha Adirondack ee waqooyiga. Calcium iyo magnesium carbonated sediments ayaa ururiyey oo la macneeyey si ay u sameeyaan sariirta hoosta ah ee loo yaqaan 'Little Falls Dolostone' maanta. Inkasta oo lagu aasay, godadka waxaa abuuray biyo dhexdhexaad ah oo abuuraya xayawaanka kaas oo karkhadlaha la sameeyay. Inkasta oo qaybta buundada ay tahay Cambrian da 'da' quartz ah oo ku dhexjira xayawaanka waxaa loo fasiraa inay sameeyeen inta lagu jiro mudada Carboniferous. Waxyaalaha dabiiciga ah ee laga helo, silicon dioxide iyo pyrite, sulfide birta ah, waxay u egtahay sida dadka yar yar ee dhagaxa laga sameeyey ee dolomite iyo calcite. Maadaama ay dusha sare ku dhejiyeen dhagaxa iyo heerkulku kor u kacay, kristaanku wuxuu ku koray godadka si tartiib tartiib ah, taasoo keentay dhalooyinka quartas ee caddayn gaar ah. Ka-soo-baxyada waxaa laga heli karaa crystals kuwaas oo bixinaya sheekooyinka asalka jewiga Herkimer. Waxaa laga helaa gudaha qaybaha kala duwan, dareeraha, dareeraha, biyaha cusbada ama batroolka, gaasaska, inta badan kaarboonka dioxide, laba-iyo seddex marxaladood oo kala duwan, iyo xasaasiyad aan fiicnayn. Anthraconite waa isku dhafka adag ee ugu badan.
Dhirta Herkimer, oo ka timid Afghanistan